Amawebhusayithi amahle kakhulu okuthola konke mahhala - Izindaba Zamagagethi | Izindaba zamagajethi
Ukubuka uchungechunge noma ama-movie online kuyinto evame kakhulu. Yize uma kukhulunywa ngokubuka lokhu okuqukethwe ku-inthanethi sinezindlela eziningi zokukwenza. Njengoba sinezingxenyekazi eziningi zokusakaza ezitholakalayo zalokhu, esingabuka ngazo uchungechunge lwethu oluthandayo noma ama-movie kalula. Singasebenzisa futhi amakhasi wokulanda mahhala noma mahhala.
Ngakho-ke noma ngabe ufuna izindaba mayelana nobugqila namakhasi athandwa kakhulu ukulanda nokubuka okuqukethwe kwamahhala, noma izindaba zakamuva ezimayelana nezinkundla zokusakaza ezihamba phambili emakethe, ungaphuthelwa lesi sigaba ku-Blusens.
Kuyo uzokwazi ukuthi uhlale wazi lezi zindaba ezimayelana nokugebenga nokusakaza, ukuze ungaphuthelwa yilutho olwenzeka kule ngxenye emakethe. Lapha ungafunda izindaba zakamuva mayelana nalesi sigaba:
IPirate Bay iyasebenza futhi esizindeni sayo
Por URafa Rodríguez Ballesteros kwenza Unyaka we-1 .
IPirate Bay akungabazeki ukuthi ibe yireferensi iwebhusayithi iminyaka yazo zonke izinhlobo zokulanda, ...
Isikhathi esingaphezu konyaka nje, wonke amakhasi wewebhu afuna ukwazi ukukhonjiswa enjini yokusesha ...
Ukulwa nezinkunzi kuyaqhubeka nokuba nokulandela okukhulu kwamanye amazwe. Yize ukuba khona kwakhe kuthelevishini kwehlile kusuka ...
Ungayibuka kanjani i-Boxing online
Isibhakela wumdlalo onezigidi zabalandeli emhlabeni jikelele. Yize kungavamile ukuthi kube ...
I-UFC (Ultimate Fighting Championship) isibe ngomunye wemidlalo ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Izigidi…
Ungayibuka kanjani ithenisi mahhala online
Ithenisi ngumdlalo othakazelisa izigidi zabasebenzisi. Ngezikhathi ezithile, kungenzeka ukubukela eminye imiqhudelwano ...
Yini futhi yini iDeezloader ye
Abanye benu mhlawumbe bayalazi igama elithi Deezloader. Yize kungenzeka kakhulu ukuthi kuningi kakhulu ...
Por UMiguel Hernandez kwenza iminyaka 3 .
I-Plusdede isimemezele ukuvalwa kwayo, okwake kwaba esikhundleni sePordede, iwebhusayithi eyabelwe ukwabelana ...
Ibhola likanobhutshuzwayo selibe yiGrail Engcwele yezinkampani eziningi ezinikela ngokuqukethwe okubukwayo eSpain, yize ...
I-Playz yindawo entsha yokuqukethwe yedijithali ye-RTVE lapho sithola khona ukukhetha okubanzi kwe ...
Lapha akusindiswa muntu. Ukuthi babamba amazwe omhlaba wonke aphishekela ukwenza umkhiqizo wawo ngomgunyathi emhlabeni wonke, ...
Bheka i-TDT online
Izindawo ezihamba phambili zokubuka ama-movie online mahhala